Ma heli karaa backlinks dheeraad ah boggayaga internetka iyadoon bixinin dammaan?
Looma baahna inaad sheegto inaad u baahan tahay inaad dib u hesho tayo sare oo tayo sare leh haddii aad rabto inaad bedesho istaraatiijigaaga hada jira ee aad ku bedesho mid dhab ah oo leh karti heer sare ah. Dabcan, faafinta "juice link" iyo wanaajinta awoodda internetka ama blogka ee indhaha Google waa hab weyn oo laguugu wadi karo gaadiidka internetka. Ugu dambeyntii - si aad u aragto websaydhkaaga ama blog ka mid ah 10ka natiijooyinka raadinta ugu sarreeya liiska Google ee SERPs - logiciel gestion de projet de construction dun. Laakiin sidee ayaad u heli kartaa dib-u-qabasho dheeraad ah, haddii aadan haysan fursad ama aadan rabin inaad hesho kuwa aad halis u ah? Waxaa suurtagal ah in xalka ugu macquulsan ee halkan ku yaala ay tahay inaad naftaada dib u hesho - nasiib wanaag waxaa jira waxyaabo badan oo loo isticmaalo hababka DIY ee dhismo tayo sare leh oo kor u qaadi kara dadaalkaaga guud ee SEO-ka bilaashka ah - adigoon qarash gareeyo dakhligaaga, website-kaaga ama blog-kaaga oo halis ugu jira in aad naftaada ku heshid rikoor rigoore leh Google. Halkan waxay yihiin, dhab ahaantii la gaari karo oo ka fudud oo aad ka fikiri kartid.
Talooyinka ugu wanaagsan ee lagu heli karo dib u bilaash bilaash ah - adigu adigaa sameeya
Faallooyinka ku saabsan blogyada leh astaamaha DoFollow - waa hab weyn oo kaa caawinaysa inaad hesho dib u habeyn dheeraad ah. Dabcan, faraq kasta oo caan ah ayaa kuu ogolaanaya inaad dib u celiso DoFollow qaybta faallooyinka - inta badan si looga hortago wax kasta oo ah spammy ama hawlaha aan khuseyn. Si kastaba ha ahaatee, waxaan kugula talineynaa in aad bilawdo ololahaaga dhismahaaga xorta ah si toos ah. Dhamaan waxaad u baahan tahay halkan kaliya waa inaad ku qaadataa wakhti go'an oo lagu eego blogka saxda ah adigoon xaddidaneyn oo aad taas u isticmaashid faa'iidadaada.
Dib u cusbooneysiinta ereyada hore ee bulshada ama buuxinta kuwaaga cusub waxay kaloo tahay xalka ugu fiican ee lagu heli karo taageerooyin badan - si dhakhso ah iyo bilaash ah. Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad qabato gadaal cusub oo tilmaamaya boggaaga ama blog-kaaga inaad hubiso in dhammaan noocyadaada aad ka wadaagto boggaga bulshada (sida Facebook, Google Plus, LinkedIn, Twitter, iwm.) Waxay leeyihiin xiriiro ku tilmaamaya boggaaga ama bloggaaga - oo waad samaysay. Su'aalaha iyo Jawaabaha
Waxa kale oo aad noqon kartaa khabiir ku ah ganacsigaaga ganacsiga ama niche market - si fudud ugu biiro wadahadal kulul (tusaale, Quora) su'aalaha iyo jawaabaha ku habboon mowduuca ugu weyn ee boggaaga ama blogga. Kaliya iska hubso inaad mowduuca saxda ah qaadato, waqti ku qaadato si aad u heshid aqoon xeel dheer, oo si fudud u soo dir fikradda qiimaha leh ama xal fiican oo loo qoondeeyey, in la raaco dhabarka dambe ee tilmaamaya ilahaaga. Habkaas, kaliya ma heli kartid oo kaliya boggaga internetka ama blogka laakiin waxaad tustaa khibraddaada xoogga leh iyo maamulka aad ku kalsoon tahay inaad wado istaraatiijiga guud ee SEO waqti dheer.
Dhab ahaan, ma aha hab gabi ahaanba bilaash ah si aad u hesho dib-u-celin dheeraad ah. Waxaan ula jeedaa in barta casriga ahi ay kaa rabto inaad ku maal gashato wakhti iyo dadaal si aad u qorto qoraalka qasabka ah ee qiimaha leh (tusaale ahaan, maqaalka tayada leh ama boostada martida) si aad u hesho dib-u-qabasho ku habboon. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ku talinaynaa in aan tixgeliyo fursaddan ka mid ah xalka aad ku dhisayso xiriirka sare si aad u hagaajisato istiraatiijiyada SEO ee miisaanka. Kaliya ha ilaawin inaad hesho wax kasta oo lagu heshiiyey oo leh blogger ama milkiilaha bogga, oo sii wado adoo siinaya qoraal qiimo leh si aad u kasbato dabeecada dabiiciga ah ee taas.